Mpikambana Ao Amin’nyGlobal Voices Nahazo Loka Ambony Fanamby Vaovao Nampanaovin’ny Knight Ho Fanamafisana Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2014 12:01 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Swahili, عربي, Español, English
Nahazo ny lokan'ny Fanamby Vaovao tamin'ny “Knight” hametrahana fandaharana erantany an'ireo orinasa mpanome tolotra aterineto i Rebecca MacKinnon, mpiara-nanorina ny Global Voices. Sary avy tamin'i Brooke Bready.
Arahabaina ireo mpikambana roa sarobidy ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices, izay anisan'ireo mpandresy tamin'ny Knight News Challenge ny taona 2014. Nambara androany (23 Jona) tao amin'ny MIT-Knight Civic Media Conference Cambridge, Massachusetts, ny valin'ny fifaninanana. Tamin'ity taona ity, nanome lelavola mitentina 3.466.000 dolara Amerikana ny fikambanana “Knight Foundation” ao Miami, ho an'ireo tetikasa mamaly ny fanontaniana hoe : “Ahoana no ahafahantsika manamafy ny Aterineto mba hisian'ny fahafahana maneho hevitra malalaka sy fanavaozana?”
Naharay vola mitentina 300.000 dolara i Rebecca MacKinnon, mpiara-nanorina ny Global Voices, mba hametrahana ny Fandaharana ny Zo Niomerika niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny “New America Foundation”. Hanampy an'i Rebecca sy ireo ekipany handahatra ireo orinasa mpanome tolotra aterineto ilay vola fanampiana, hijereny hoe ahoana ny fomba hiarovany ny fiainana manokan'ireo mpampiasa ny aterineto, ary hamoahany filaharana maneran-tany mba handrisihana ireo orinasa hanatsara hatrany ireo fomba fanaony.
Nilaza i Rebecca hoe : “Ampiasain'ny olona ireo sehatra media sosialy, ireo tolotra fifandraisan-davitra, ireo “smartphones” (finday) avy amin'ireo orinasa ireo,”. “Inona avy ireo politikany sy fomba fanaony?” Nanampy i Rebecca fa avy tamin'ny resadresaka nifanaovana nandritra ny Fihaonan'ny Global Voices ny taona 2012 tao Nairobi, Kenya, no nitsiry ny hevitra hametrahana ny Fandaharana nyo Zo Niomerika. “Nivory niaraka tamin'ny olona karazany maro aho mba hahafahana mahita fomba hitànana ho tompon'andraikitra ireo orinasa tsirairay avy, ary nilaza i [Mpikambana ao amin'ny Vondromp-piarahamonina Egyptiana] Mohamed ElGohary hoe: “Te-hahita lisitra aho.” Ary maro ireo olona hafa nanohy nilaza toy izany tamiko.”
Hanangona angon-drakitra momba ny fanivànana eo amin'ireo sehatra ety amin'ny aterineto toy ny facebook sy ny Twitter ny tetikasan'i Jillian C.York, mpandresy tamin'ny “Knight News Challenge”
Mikasika ireo orinasa tsy miankina ihany koa ny tetikasan'ilay iray hafa naharesy avy amin'ny Global Voices, Jillian C. York, fa amin'ny endriny hafa kosa.
Naharay loka mitentina 250.000 dolara i Jillian, izay nanatevin-daharana ny Global Voices ny taona 2007, ary nitàna ny toeran'ny solotenan'ireo mpilatsaka antsitra-po tao amin'ny fitantànana, ho an'ny tetikasany OnlineCensorship.org, sehatra izay hovokariny miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny ” Electronic Frontier Foundation”, izay maha-talen'ny Fahafahana Maneho Hevitra Malalaka azy. Amin'izao fotoana izao, amin'ny fomba tsy hitan'ny be sy ny maro moa, manangona angon-drakitra ilay tranokala, momba ireo tranganà fanivànana sehatra ety amin'ny aterineto toy ny Facebook sy Twitter, mba hanampiana ny orinasa hahafantatra bebe kokoa sy hahay handrindra ny resaka fanivànana sy ny fahafahana maneho hevitra malalaka.
“Maro tamintsika no efa niaina ilay tranga tety amin'ny media sosialy izay nanesoran'ny orinasa ny zavatra nosoratantsika na namono mihintsy ny kaonty,” hoy i Jillian. “Tena zava-mitranga erantany mihitsy io. Manantena aho fa handray anjara amin'ilay angon-drakitra ny vondrom-piarahamonina Global Voices, izay hanampy anay hampiseho amin'ireo orinasa sy manerana izao tontolo izao mihitsy ny tena fiantraikan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fandrindràna ny resaka atao ety amin'ny aterineto.”
Blaogim-Piarahamonina GV 1 andro izay